I-BLAKE LIVELY'S ENGAGEMENT RING: YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - IINDABA
Eyona Iindaba I-Blake Lively's Engagement Ring yeyona nto ayithandayo kakhulu ngenxa yesi sizathu singalindelekanga
I-Blake Lively's Engagement Ring yeyona nto ayithandayo kakhulu ngenxa yesi sizathu singalindelekanga
Ukumkanikazi wekhaphethi ebomvu ayithandayo Imifanekiso kaGetty
Ukuhlaziywa ngoJuni 19, 2020
UBlake odlamkileyo unesitayile seentsuku, kodwa kudliwanondlebe neBritane Vogue , eyona nto ayixabise kakhulu yiringi yakhe yokuzibandakanya evela kuRyan Reynolds - ukuba ngelishwa akazange ancede ekukhetheni! Akukho ncinane.
iringi yomtshato iyaqhubeka ngomnwe mni
'Eyona nto ndiyixabisayo yiringi yam yokuzibandakanya eyenziwe ngumhlobo wam othandekayo uLorraine Schwartz, ngenxa yothando nentsingiselo yalo,' utshilo uBlake. Hayi, andinasandla kuyilo lwayo - ndatshata nendoda. Ngokukodwa uLeynolds wadibana ngo-2008 ngelixa esenza umboniso bhanyabhanya 'iGreen Lantern.' Baqala ukuthandana ngo-2011 kwaye uReynolds wawuphakamisa lo mbuzo ngamanye amaxesha ngaphambi komsitho womtshato wabo wothusayo ngo-2012. Ngelixa uReynolds esenokungalifumani igalelo kuLonwabo xa wayezingela iringi efanelekileyo kuye, ngokuqinisekileyo wazingqina ukuba unencasa elungileyo.
Konke malunga neBlake Lively's Engagement Ring
Nangona u-Lively engakhange ayibonakalise iringi yakhe yokuzibandakanya kwimithombo yeendaba zentlalo okanye kwimagazini esasazekayo, iringi eyothusayo kunzima ukuyiphosa xa eyinxiba esidlangalaleni. Kuyinto yokubamba amehlo kwaye sinazo zonke iinkcukacha malunga nomsesane kaBlake Lively.
UReynolds wajika waba ngumthubi kunye nomhlobo, uLorraine Schwartz, ukuba ayile umsesane wokuzibandakanya kukaBlake Lively. Wayengathembeli kukhetho lwakhe olulungileyo nangona kunjalo, njengoko uSchwartz ethathwa njengejewler ayithandayo, ngakumbi kwisekethe yaseHollywood. Ngokudibeneyo baphupha uyilo kwaye umphumo waba sisangqa esahlukileyo nesothusayo ekungekho namnye kubo onokubonakala esusa amehlo abo.
Kwabaqalayo, eyona nto kugxilwe kuyo kwindandatho lelitye le-oval le-solitaire. Yinqwelo eyi-12 enomtsalane kwaye engenasiphako ekucaciseni, kodwa uyakholelwa okanye hayi, ayisiyiyo eyona nto inomtsalane kwindandatho kaBlake Lively! Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo kukuba yidayimani ekhanyayo ekhanyayo. Iidayimani ezipinki ezinje ngezo zisetyenzisiweyo ekucwangcisweni kwazo zithathwa njengeedayimani ezinqabileyo ezinemibala emhlabeni, ezenza ukuba ibengumsesane ngakumbi nangakumbi.
Isangqa sokuzibandakanya kukaBlake esinebhanti ye-pavet kwi-14k yenyuka igolide. Ibhendi ye-pavet ishiywe igqunywe ngedayimani macala onke - masithi le ring iyakhazimla! Iringi yakhe yokuzibandakanya yayidlala ibhendi enye yedayimane, kodwa esi sibini songeze enye ibhendi enedayimane njengendandatho yomtshato kaBlake Lively. Isangqa ngoku siyakhazimla ngamaqela amabini edayimani.
Ngokubhekisele kuseto lwegolide lwe rose, u-Lively wamisela umlinganiso wegolide we rose kubantu abaninzi abazayo .. Abanye bathi ungomnye wabantu abadumileyo bokuqala ukugungqa uyilo lwegolide lwe rose.
Isangqa esidlamkileyo sisebenza ngeendlela ezininzi, ukusuka kubukhulu becala ledwala ukuya kukuqaqamba kwedayimane enqabileyo epinki. Ngazo zonke iinkcukacha ezithandekayo, asimangalisi yinto ayithandayo yefashoni kwibhokisi yakhe yobucwebe!
Ke ingakanani indandatho yokuzibandakanya kukaBlake Lively? Iindleko eziqikelelweyo zeringi yi- $ 2 yezigidi zeedola.
Ke yintoni ongayithandiyo? Idayimani epinki emenyezeliswe nge-oval ephethe ibhanti yedayimani encinci eyenziwe ngebhanti eyenziwe lilitye lodumo lomlingiswa odumileyo uLorraine Schwartz. Kwaye wanikwa yindoda entle entle. (UBlake uhlala esenza ukuba sonke sibe nomona rhoqo, akunjalo?) Kwaye ngelixa inkqubo yakhe yokucinga imnandi, ikwayinto endala. Siyazi uninzi lwabafana ababuza uluvo lweqabane labo kwezona ndlela zinobuntu.
r & b iingoma zomtshato
Uthini ngawe? Ngaba uyishiyele kumyeni wakho xa kufikwa kumsesane wakho wokuzibandakanya? Okanye ngaba ubunezandla ezingaphezulu?
Igama lomfazi wokuqala ka-donald trump
r kunye b nothando lwengoma
yintoni iringi yomtshato enxitywe